“Ambohimalaza Time Attack 1.0”: Motobe 50 hifaninana amin’ny sokajy fito | NewsMada
Lozam-pifamoivoizana teny Iavoloha: niara-maty izy mivady, avotra ny zanany lahikely
Apaisement: les provocations doivent cesser
“Ambohimalaza Time Attack 1.0”: Motobe 50 hifaninana amin’ny sokajy fito
Par Taratra sur 23/11/2020
Hanamarika ny faran’ity herinandro ity ny “Ambohimalaza Time Attack 1.0”. “Zava-baovao eo amin’ny taranja mekanika izy ity”, hoy ny fanazavana nentin-dRandriamorasata Ditratiana, mpikarakara.
Gazety Taratra (*): Inona ilay hetsika “Ambohimalaza Time Attack 1.0”?
Randriamorasata Ditratiana (-): Hetsika karakarain’ny X’Inov créateur d’impact sy ny BMC ary ny MCM sy ny Trace izy ity ary hazakazaka adim-pamantaranandro natokana ho an’ny moto manana motera lehibe sy matanjaka (grosses cylindrées), tanterahina amin’ny lala-miakatra mampitohy an’Ambohimalaza sy Imerinkasinina, mirefy 4,03 km.
(*): Maninona no “grosses cylindrées” fa tsy ny moto rehetra?
(- ): Tsotra ny antony, efa manana ny hetsika sy ny fifaninanana ho azy ny moto kely toy ny “scooter” sy ny hafa ka amin’ity, omena sehatra manokana ny moto lehibe, sady hamerenana indray ny fitiavan’ny olona izany fanatanjahantena mekanika izany, taorian’ny fihiboana naharitra fito volana.
(*): Antony nizarana azy ireo ho ao anaty sokajy fito?
(-): Na samy moto lehibe aza ireo, tsy mitovy avokoa ny tanjany ary samy manana ny endriny avy ny tsirairay. Noho izany, tsy maintsy sarahina ka ampiarahina izay mitovy hery, hampifandanja tsara ny hazakazaka. Raha tsiahivina, ny Chopper, ny Trail, ny Maxiscooter, ny Super motard, ny Roadster, ny Sportive ary ny Custom Vintage ireo sokajy hifaninanana.
(*): Inona ny mason-tsivana ho fandraisana anjara?
(-): Anisan’ny takinay amin’ny mpifaninana rehetra ny fitondrana ny aroloha, ny arotratra ny arovatana sy ny baoty ary ny arolohalika. Eo koa ny fizahana teknika ny moto ary ny fizaham-pahasalamana ho an’ny mpifaninana tsirairay. Raha misy tsy feno ireo, tsy azo atao ny mandray anjara. Ankoatra izay, ferana ho 50 ihany ny isan’ny mpandray anjara.
(*): Misy fetra ve ny taon’ny mpifaninana?
(-): Misokatra ho an’ny rehetra ny “Ambohimalaza Time Attack 1.0”, saingy kosa mila taratasy fanekena avy amin’ny ray aman-dreny ho an’ireo mpifaninana tsy ampy taona. Hisy “licence journalière” omen’ny federasiona ho an’ireo tsy ao anaty klioba.
(*): Nisy ilay lozam-pifamoivoizana, nitranga herinandro lasa. Inona no fepetra raisin’ny mpikarakara.
(-): Tanjonay ny mitandro ny ain’ny mpifaninana rehetra. Mba hisorohana ny loza, tsy maintsy hidina ny lalana rehetra ka tsy misy fiara na moto mahazo mandeha mandritra ny fifaninanana. Fefena ny toerana misy ny mpijery sy ny mpifaninana, amin’io.
(*): Hisy mpifaninana avy any ivelany ve amin’ity?
(-): Efa nisy niantso anay ireo mpifaninana avy atsy La Réunion sy avy any Frantsa fa miandry ny fisoratana anaran’izy ireo izahay izao. Anisan’ny tadiaviny mantsy ny zava-baovao tsy mbola nisy teto Madagasikara toy ity “Ambohimalaza Time Attack 1.0” ity.
(*): Ankoatra azy ireo, mety hahitana mpifaninana vehivavy ve?
(-): I Karen, vehivavy malagasy mpitondra moto lehibe. Efa nanambara ny fahavononany amin’ny fandraisana anjara izy ary inoanay fa ho anisan’ireo hifaninana ny tenany. Ankoatra azy, andrasan’ny rehetra koa ny fifanandrinana eo amin’ireo zandrikely kalaza toa an’i Harena sy i Anjo.
(*): Ahoana ny fankasitrahana ho an’ny mpandresy sy ny hafatry ny mpikarakara?
(-): Hahazo amboara avokoa ireo telo voalohany isaky ny sokajy mifaninana. Hisy koa fisarihana hahazoana loka hafa, ho azy ireo, avy amin’ireo mpanohana sy mpiara-miasa izay efa isaorana eto sahady. Tsy ho diso anjara amin’izany koa ny mpijery. Tongava maro fa zava-baovao be ity “Ambohimalaza Time Attack 1.0” ity. Hahafinaritra ny lalao ary tsy ho diso fanantenana ny mpankafy sy ny mpanatrika.
Dinika nangonin’i Torcelin
Kitra – «Ligue des champions d’Europe 2021»: sahirana ny Real vao naharesy ny Atalanta 26/02/2021
Lomano- Mada 25 m: hanana solontena avokoa ny ligy rehetra 26/02/2021
Asief-Taom-pikatrohana 2021: tsy raikitra ny lanonam-panokafana 26/02/2021
Fondation Hiroshi Uchida: nahazo tohana ny mpianatry ny oniversite miisa dimy 26/02/2021
Jeune Chambre Internationale (JCI): vonona ireo tanora mpandraharaha hanarina ny toekarena 26/02/2021
FAKAFAKA: hitondra inona iny andro iny ?